Tag: internet tax | Martech Zone
Dhaqaalaha ayaa ku burburay Mareykanka. Iyada oo la adeegsanayo qarash gareynta diiwaanka, farqiga hantida ayaa sii kordhaya, faqriga ayaa sii kordhaya, tirada muwaadiniinta ku tiirsan shaqo la'aanta, kaararka cuntada, naafada ama daryeelka ayaa ku jira heerarka rikoorka. Waxaa jira kaliya hal qeyb oo dhaqaalaha Mareykanka ah oo kobcaya - shaqooyin sifiican looga qaatey, shaqooyin badan oo furitaan ah, tan maalgelin maalgashi, iyo iibka sii kordhaya. Qeybtaasi waa internetka. Iyada oo tafaariiqleyaasha waaweyn ee waaweyn ay silcayaan iyo dawladda